Ukuqedwa kweWebhu kuhilela isenzo sokuqoqa idatha yewebhusayithi usebenzisa i-web crawler . Abantu basebenzisa amathuluzi okukhipha idatha yedatha ukuze bathole ulwazi olubalulekile kusuka kuwebhusayithi engatholakala ukuthunyelwa kwelinye idrayivu yesitoreji sendawo noma i-database eseduzane. Isofthiwe ye-web scraper iyithuluzi elingasetshenziselwa ukukhasa nokuvuna ulwazi lwewebhusayithi njengezigaba zomkhiqizo, iwebhusayithi yonke (noma izingxenye), okuqukethwe kanye nezithombe - na15 salesforce certification. Ungakwazi ukuthola noma yikuphi okuqukethwe kwewebhusayithi kusuka kwesinye isayithi ngaphandle kwe-API esemthethweni yokusebenzisana nedatha yakho.
Kulesi sihloko se-SEO, kunemigomo eyisisekelo lapho amathuluzi okukhishwa kwedatha yewebhusayithi asebenza khona. Ungakwazi ukufunda indlela isicabucabu esenza ngayo inqubo yokukhwabanisa ukulondoloza idatha yewebhu ngendlela ehlelekile yokuqoqwa kwedatha yewebhusayithi. Sizocubungula ithuluzi lekususwa kwedatha lewebhu leBrickSet. Lesi sizinda iwebhusayithi ye-community equkethe ulwazi oluningi mayelana nezinethi ze-LEGO. Kumele ukwazi ukwenza ithuluzi le-Python lokukhipha ithuluzi elikwazi ukuhamba kuwebhusayithi ye-BrickSet bese ulondoloza ulwazi njengoba idatha ibeka esibukweni sakho. Le-scraper yewebhu iyanda futhi ingafaka izinguquko zesikhathi esizayo ekusebenzeni kwayo.
Ukuze umuntu enze i-Python web scrapper, udinga imvelo yendawo yokuthuthukiswa ye-Python 3. Le imvelo yokugijima i-Python API noma i-Software Development Kit ngokwenza ezinye izingxenye ezibalulekile yesofthiwe yakho ye-crawler yewebhu. Kukhona izinyathelo ezimbalwa umuntu angazilandela lapho enza leli thuluzi:
Ukudala isisindo esiyisisekelo